सविधान संशोधनका विषयलाई छाडेर अगाडि बढ्न सकिदैन (अन्तरवार्ता) | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » सविधान संशोधनका विषयलाई छाडेर अगाडि बढ्न सकिदैन (अन्तरवार्ता)
सविधान संशोधनका विषयलाई छाडेर अगाडि बढ्न सकिदैन (अन्तरवार्ता)
प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश नम्बर १), संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य जयराम यादव मोरगं जिल्लाका चर्चित नेता हुनुहुन्छ । पहिलो सविधानसभाको उपचुनाव जित्नु भएका जयराम यादवलाई त्यहाँ विकास प्रेमी नेताको रुपमा पनि चिनिएको छ । प्रदेश १ का प्रदेश सांसद समेत रहनु भएका उहाँ प्रदेश सरकारमा मधेशको पक्षमा राख्ने कुराले गर्दा जहिले चर्चा रहि रहनुहुन्छ । मधेश आन्दोलनको अगुवा नेताको रुपमा चिनिनु भएका उहाँ एक मधेश एक प्रदेश हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आउनु भएको छ यद्यपी मधेशका तीन जिल्ला झापा, सुनसरी र मोरगंलाई प्रदेश १ मा राखिएको छ । यी तीन जिल्लालाई प्रदेश २ मा राख्नका लागि के भइरहेको छ, प्रदेश सरकारमा मधेशको बारेमा के के भइरहेको छ लगायतका विषयमा नेता जयराम यादवसँग सहारा टाइम्सका लागि गरिएको कुराकानीः
तपाई मधेश आन्दोलनबाट जन्मेको नेता अहिले एक नम्बरको सांसद हुनुहुन्छ । त्यो प्रदेशमा मधेशको गतिविधि कस्तो भइरहेको छ ?
–मधेशको गतिविधि वितगको तुलनामा अलि बढेके छ । पहिलो मधेश आन्दोलनको रापतापबाट विराटनगरमा त्यो बेला अलि राम्रो देखिएको थियो । हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि त्यहीबाट जित्नु भएको थियो । मधेशी जनअधिकर फोरम हुँदा झापा, मोरगं र सुनसरीमा संगठन थियो, त्यो पनि तल्लो बेल्टमा मात्र । अहिले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बनेपछि प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा हाम्रो संगठन छ । प्रदेश १ भएपनि मधेशमा कुनै प्रकारको फरक परेको छैन । बरु पहिला भन्दा अहिले उत्साहित देखिएको छ । अर्थात सांगठनिक कुरा गर्ने हो भने पहिलाको भन्दा राम्रो भएको छ । जसले जस्तो काम गर्छ उसले राम्रो गर्ने हो । माथीबाट यहाँ हस्तक्षेप छैन, न यहाँबाट माथी हस्तक्षेप छ ।
फोरम नेपालले प्रदेश २ मा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सफल भएको छ । मधेशका सबै गतिविधिहरु त्यही केन्द्रीत छ यसको असर प्रदेश १ मा कस्तो छ ?
–प्रदेश २ मा फोरम नेपालले सरकार गठन गरेपछि त्यसको असर सातवटै प्रदेशमा परेको छ । र, पार्टी, नेता, कार्यकर्तामा राम्रो सन्देश गएको छ । जनताहरु उत्साहित भएको छ । दुई नम्बर प्रदेशसँग एक नम्बर प्रदेश टाँसिएर रहेका हुनाले त्यसको प्रभाव यहाँ राम्रै छ । दुई नम्बर प्रदेशपछि प्रदेश १ मै मधेशीको चहलपहल राम्रो छ । जनसँख्या पनि राम्रै छ त्यही भएर प्रदेश २ मा हाम्रो सरकार भएकाले त्यसको फाइदा प्रदेश १ लाई पनि भइरहेको छ । पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई, रकम चेम्जोङ्ग, युवराज कार्की लगायतका नेताहरु यही प्रदेशका भएका हुनाले यहाँका नेता तथा कार्यकर्तामा मनोवल कम भएको छैन । मनोवल उच्च नै रहेको छ । हामी कम सँख्यामा जितेपनि हाम्रो उपस्थिति प्रदेशभरि नै छन् । संगठन निर्माणको काम पनि अगाडि बढी रहेको छ । भोलीको दिनमा प्रदेश २ पछि फोरम नेपालको प्रादेशिक सरकार कही बन्छ भने त्यो हो प्रदेश १ । आउने दिनमा यहाँ पनि प्रादेशिक सरकार बनाउने तयारीका साथ हाम्रो संगठन निर्माण भइरहेको छ ।
प्रदेशमा फोरम नेपालको उपस्थिति त्यही राम्रो छैन, तपाई नै भन्नुभयो कमसँख्यामा जितेका छौं । यस अवस्थामा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा मधेशको मुद्दाहरु कसरी उठिरहेको छ ?
–प्रदेश १ को प्रदेशसभाको संसदीय दलको नेता रहेको छु । दुईजना अर्को प्रदेश सांसद समानुपातिकबाट हुनुहुन्छ । हामी तीनजनाले प्रदेशसभामा मधेशलगायत आदिवासी जनजाति, शिल्पी, पिछडिएकाहरुको पक्षमा अवाज उठाइरहेका छौं । ९३ जनामा हामी तीनजना छौं । कुरा राख्नका लागि त एकजना नै काफिर हुन्छ तर हामी तीनजना छौं । हामीले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि कुरा उठाईरहेका हुन्छौ । सँख्याले अधिकार पाउने कुरा हुँदैन । हाम्रो सरकार नभएपछि हामीले यी यी अधिकार पाउनुपर्छ, यसखालको विधेयक बन्नुपर्छ, ऐन कानुन बन्नुपर्छ भनि नै रहेका छौं ।
तपाईहरुले उठाएको कुरा त्यहाँको सरकारले कतिको सुनेको छ, कतिको व्यवहारमा लागु गरेको छ त ?
–प्रदेश सरकार भर्खर गठन भएको छ । अहिलेसम्म २३ वटा विधेयक पारित भएका छन् । केहीको राजपत्र पनि जारी भइसकेका छन् । त्यसमा कुनै प्रकारको विभेद भएको छैन । हामीले दिएको सुझाव अनुसार नै आएको छ । स्वभाविक यो पनि हो कि जसको सरकार छन् त्यसले अलिकति आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छन् । आफ्नो अनुसार विकास गर्न र काम कारवाही गर्न चाहन्छन् नै । यसमा अन्यथा लिनु हुँदैन । अन्यथा त्यस्तो ठाउँमा लिनुपर्छ जहाँ आफूले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गरेको हुँदैन । विभेद गरिरहेको हुन्छ, त्यस अवस्थामा केही सोच्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ त्यस्तो केही देखिएको छैन । समानताका आधारमा बजेटहरु पाउनुपर्छ । कसैलाई काखापाखा गर्नुहुँदैन भनि भन्दै आइरहेका छौ ।
मैले त्यहाँका केही मधेशी नेतासँग कुरा गरेका थिए, उहाँले भन्नुभएको थियो, जसरी हामीलाई केन्द्र सरकारले विभेद गरिरहेको छ त्यसरी नै प्रदेश १ का सरकारले गरिरहेको छ ।’ तपाईले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
–व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने मैले त्यस प्रकारको विभेदमा परेको छैन । कुनै व्यक्ति वा नेता कुनै प्रकारको विभेदमा पर्नुभएको होला त्यो छुट्टै कुरा हो तर मैले यहाँ कुनै प्रकारको विभेदको सामना गर्नुपरेको छैन । जसको सरकार छ, त्यसले हाली मुहाली गर्ने नै हो । विकासको नाममा हाली मुहाली गर्ने नै हो । काखापाखा गर्ने नै हो । तर, त्यसमा हामी चनाखो रहनु पर्छ । त्यसको लागि हामीले सदनमा अवाज उठाइरहेका हुन्छौं । बेलाबेलामा सरकारलाई सचेत गराई रहेका हुन्छौं । केन्द्रले जसरी मधेशी भनेर विभेद गथ्र्यो । अधिकारबाट बन्चित नै गथ्र्यो त्यस्तो मैले यहाँ पाएको छैन । यदि केही समस्या छ भने हामी त्यसलाई समाधान गर्न सक्छौं । त्यसका लागि आवाज उठाउन सक्छौ ।
मधेश आन्दोलनको बेला झापा, सुनसरी र मोरगं जसरी उठेको थियो, त्यसरी चुनावमा साथ दिएन त्यस्तो किन ?
–मधेश आन्दोलनको समयमा म नै आन्दोलन मोर्चाको संयोजक थिए । पहिलो सविधानसभा चुनावमा मोरगंको नौवटा क्षेत्रमध्ये हामीले चारवटा जितेका थियौं । उपचुनाव हुँदा म पनि यहीबाट जितेर गएको थिए । तर, २०७० सालको दोस्रो सविधानसभा चुनावमा हामी सबै सीट गुमाऔं । संघीय चुनावमा यहाँ मोरगंमा छवटा क्षेत्र भएको छ । एकजना म मात्र प्रदेशमा जिते । सोचेको जस्तो सफलता हामीले हासिल गर्न सकेनौ । यसपटक बामगठबन्धनको लहर, दुई नम्बर प्रदेशमा फोरम र राजपाको चुनावी गठबन्धन बन्नु तर एक नम्बर प्रदेशमा फोरम र राजपा नमिल्नुले यहाँ फोरम नेपाल कमजोर देखिएको हो । तर, हामी जहाँ हारेका छौं थोरै मतले हारेका छौं । महानगरपालिकाको चुनावमा पनि हामी बदरमतका कारण हारियौै । तर आउने दिनमा हाम्रो अवस्था यो भन्दा राम्रो नै हुनेछ । किनभने पहिलाको भन्दा संगठन राम्रो हुँदै गइरहेको छ ।
झापा, सुनसरी र मोरगं पनि दुई नम्बर प्रदेशमा मिल्नुपर्छ वा पुरै मधेश एउटै प्रदेश हुनुपर्छ भनि आन्दोलन भएको थियो तर अहिले प्रदेश १ भएको छ । झापा, सुनसरी र मोरगलाई दुई नम्बरमा मिलाउनुपर्छ भनि आन्दोलन सेलाएको छ भित्र भित्र केही भइरहेको छ कि छैन ?
–सिमांकनको लडाई अझै हाम्रो जारी छ । संघीय आयोगबाट त्यसलाई टुग्यांउने भनेको छ । शुरुदेखि नै हामी एक मधेश एकप्रदेशको पक्षमा थियौं । त्यही मधेशलाई तीन टुक्रा गरेको छ । एक नम्बर, दुई नम्बर र पाँच नम्बर प्रदेशमा विभाजन गरेको छ । अरु केही जिल्लालाई अरुअरु प्रदेशमा मिसाएको छ । अर्थात मधेशलाई टुक्रा टुक्रा बनाएको छ । अझै पनि एउटै मधेश हुनुपर्छ भनि हाम्रो माग कायमै छ, दियो भने हाम्रो लागि धेरै नै राम्रो हो । तर, प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगर कायम गरेपछि मधेशी जनतामा एकप्रकारको सन्तवना आएको छ । विराटनगर राजधानी भएपछि यहाँ विकासको गति बढ्ने हो कि भन्ने शहरबजार बालाहरु त्यो मानसिकतामा गएका छन् । विराटनगर राजधानी भएका कारणले झापा, सुनसरी र मोरगंका जनता अलिकति खुशी भएको मैले पाएको छु । त्यसैले यसको बारेमा अलिकति चर्चा सेलाएको छ ।
त्यसो भए झापा, सुनसरी र मोरगलाई दुई नम्बरमा मिलाउनका लागि सोचे जस्तो आन्दोलन हुँदैन अब ?
–यदि विराटनगर राजधानी भएन भने दुई नम्बर प्रदेशमा मिल्नका लागि प्रयास गर्नेछ र त्यसका लागि आन्दोलन पनि गर्नेछ तर विराटनगर नै रह्यो भने सोचे जस्तो आन्दोलन नउठ्न पनि सक्छ । किनभने मान्छे सुविधा भोगी हुँदै गइरहेका छन् । अधिकार र पहिचानका कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर झापा, सुनसरी र मोरगका मधेशी जनताका लागि जनकपुरभन्दा विराटनगर नै सजिलो भएको छ । र, त्यसप्रकारको चर्चाहरु पनि सुनिने गरेका छन् । विराटनगर राजधानी भएपछि मधेशी जनतामा एकप्रकारको आत्मविश्वास बढाएको छ । प्रदेश १ को राजधानी मधेशमै रहेको अनुभूती गर्न थालेका छन् ।
फोरम नेपालले पहिलो एकता महाधिवेशनको मिति पनि तय गरिसकेको छ, तयारी तीब्र भएको छ प्रदेश १ मा के भइरहेको छ ?
–प्रदेश १ पनि महाधिवेशन लागि सकेको छ । प्रादेशिक संरचना अनुसार अधिवेशनहरु भइरहेको छ । प्रदेशका १४ वटा जिल्लामा १३७ वटा स्थानीय तह छन्, त्यसको वडा तहसम्म अधिवेशन हुन्छ । सबैको अधिवेशन भएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेर बैशाखमा हुने सहभागी हुनेछन् । नयाँ सदस्यता वितरण भइरहेको छ भने क्रियाशिल सदस्यहरुको नविकरण पनि धमाधम भइरहेको छ । अहिले संगठन पुरै महाधिवेशनमै भएको छ ।
मधेशवेसमा बनेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल महाधिवेशनपछि त्यही संरचनामा पार्टी अगाडि बढ्छ कि अहिले पार्टीमा हिमाल र पहाडको जस्तो बर्चस्व छ त्यो कायमै रहन्छ ?
–हाम्रो लडाई मधेशी र पहाडीको लागि होइन । हामी अधिकारका लागि लडिरहेका छौ । मधेशी पार्टीमा मधेशी मात्र बस्ने, पहाडी पार्टीमा पहाडी मात्र बस्ने खालको राजनीतिक दल हुनसक्दैन । पार्टीमा पनि समावेशी हुनुपर्छ । पार्टीमा हिमालदेखि तराईसम्मका सबै वर्ग र समुदायका व्यक्ति रहनुपर्छ अनि मात्र राष्ट्रिय पार्टी बन्छ । हाम्रो पार्टीमा अहिले कोही मधेशी वा कोही पहाडी भएर देखिएको छैन । सबै बराबर छन् । सबै आआफ्ना क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । मधेशी, पहाडी भन्दा पनि अधिकार प्राप्त कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा विशेष जोड दिनुपर्छ । यदि मधेशको अधिकारका लागि पहाडी समुदाय लड्न तयार छ भने मधेशी नेता राम्रो कि पहाडी नेता राम्रो । यदि पहाडको अधिकारका लागि मधेशी समुदाय लड्न तयार छ भने मधेशी नेता राम्रो कि पहाडी नेता राम्रो । त्यसैले यो पहाडी र मधेशीको कुरा छाडेर अधिकारको कुरामा जानु हाम्रो लक्ष्य हो ।
हिमालसम्म फैलिएको फोरम नेपालको संगठनलाई अपेक्षाकृत मत त्यताबाट प्राप्त भएन आखिर मधेशले नै साथ दियो हैन ?
–हो, फोरम नेपाल मधेश आन्दोलनबाट जन्मेका पार्टी भएका हुनाले स्वभाविक रुपमा हिमाल, पहाडभन्दा मधेशमा त्यसको संगठन राम्रो छ । त्यही भएर चुनावमा राम्रो नतिजा त्यहाँबाट आयो । अर्को कुरा यसपटकको चुनावमा ६०–७० वर्षका पुराना ठूला दलहरु नै ठाउँ ठाउँमा फेल खाएका छन् भने हाम्रो त भर्खरको पार्टी हो । त्यसैले हामी चिन्तित छैनौ । हामी संगठन निर्माणमा लागेका छौं । अगामी चुनावमा हिमाल र पहाडमा पनि राम्रै नतिजा दिन्छ भनि हामीले विश्वास लिएका छौं । मधेशको जगमा टेकेर हामी हिमाल चढ्छौ ।
महाधिवेशनको तयारीसँगै फोरम नेपालले राजपा नेपालसँग एकीकरण गर्ने भनि वार्ता समिति बनाएको छ, कहाँ पुग्यो वार्ता ?
–हाम्रो पार्टीले राजपा नेपालसँग मात्र होइन, विचार र सिद्धान्त मिल्ने अन्य दलहरु पनि एकीकरण गर्नका लागि वार्ता समिति गठन गरेको हो । पार्टी एकीकरण मात्र होइन, कुनै दलबाट आएका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि हामी पार्टी प्रवेश गराउँछौ । त्यसमा राजपा नेपालबाट पनि नेताहरु आउनसक्छ ।
–मेरो व्यक्तिगत विचार बुझ्नु हुन्छ भने राजपा नेपाल कुनै सिद्धान्त र विचार बोकेको पार्टी हो जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले पनि पार्टीको रुप लिनु भन्दा पनि व्यक्ति विशेषको रुपमा रहेको म हेर्छु । छजनामा एकरुपता हुन सकिरहेको छैन भने त्यो पार्टी कसरी बन्छ । छजनाको बीचमा कुरा मिलिरहेको छैन भने फोरम नेपालसँग एकीकरण हुन्छ भने कुरा कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ । छजनाको छवटा विचार रहेको छ । एउटा सिगों विचार छैन, सिगों विचार भयो भने मात्र एकीकरण हुनसक्छ । अथवा ती दलमा रहेका कतिपय नेताको विचार र सिद्धान्त फोरमसँग मिल्छ भने उ मात्र फोरममा आउनसक्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा एकीकरण हुने सम्भावना कम रहेको म देख्छु ।
फोरम नेपाल अहिले सरकारमा सहभागी भएको छ । सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लगाएको छ तपाईले यसमा कतिको सम्भावना देख्नुभएको छ ?
–हामी समृद्धि र विकासका बाधक पनि होइनौ, विरोधी पनि होइनौ । सरकारले जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्य हाम्रो पनि हो । तर, हाम्रो अधिकार र पहिचान अझै सुनिश्चित भएको छैन । अधिकार र पहिचानका लागि हामी अझै लडिरहेका छौं । तत्कालिन तीन दलले मिलेर सविधान बनाएको छ । जसमा निकै त्रुटीहरु छन् । जसलाई अहिलेका ठूला दलका नेताहरुले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । त्यसैले सविधान संशोधनलाई हामी प्राथमिकतामा राखेका छौ । विकासका कुरा गर्ने हो भने २० वर्षमा नभएका कामहरु अहिले हामी गाउँगाउँमा हेर्न सक्छौ । अहिले एउटै गाउँपालिका पाँचवटा स्काभेटर र डोजरले काम गरिरहेको हामी पाउँछौ । पहिला एउटा पनि पाउन मुस्किल थियो । विकासको गतिलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । तर सविधान संशोधनलाई छाडेर अगाडि बढ्न सकिदैन ।